Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးအန္တရာယ်များ - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT
ပင်မစာမျက်နှာ/Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးအန္တရာယ်များ - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးအန္တရာယ်များ - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOTteknamfg2018-01-21T07:06:03+00:00
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး HBOT အန္တရာယ်များ
ဘာဖြစ်သလဲ Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး? HBOT ကုသမှုအခန်းထဲက၏ဖိအားပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဖိအားထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့အချက်မှတိုးပွါးနေစဉ်လူနာ 100% ဆေးဘက်တန်းအောက်စီဂျင်ရှူရှိုက်ရသောထဲမှာ FDA ကနှင့် AMA ကအတည်ပြုတစ်သတ်မှတ်ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်လက်ထောက်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအစွမ်းရည်အရှိန်မြှနှင့်မြှင့်တင်ရန်။ HBOT လုံခြုံ, နာကျင်မှု့မရှိတာ, Non-ထိုးဖောက်အခြားရွေးချယ်စရာနှင့် / သို့မဟုတ်တွဲဖက်ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဘယ်သူမျှမလေးနက်သောပြဿနာများ Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်တချို့ပြဿနာများသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကုသမူလတန်းအခွအေနေနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
နားကို Barotrauma - "အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်" နှင့်အလယ်အလတ်နာကျင်မှုမှပျော့စေနိုင်ပါတယ်နားအကြောင်းတရားများရှင်းလင်းရေးနှင့်အတူအခက်အခဲ။ အလယျပိုငျးနားကို barotrauma HBOT ကုထုံး၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလူနာခနျးနွယ်ဖွားများနှင့်တက်နေစဉ်အတွင်း (equilibrating) မိမိတို့နားရှင်းလင်းရေးအားဖြင့် barotrauma ကာကွယ်ပေးသည်။ အော်တိုငွေကြေးဖောင်းပွမှုလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲတဲ့အရေအတွက်က tympanotomy ပြွန်အော်တိုတက်သွားမနိုင်သောသူတို့အဘို့သုံးနိုင်တယ်, အသုံးပြု, သို့မဟုတ်နိုင်ပါသည်။
အကှေ့နာကျင်မှု, Upper အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါပိုးမကူးစက်နှင့်နာတာရှည် Sinusitis - အကှေ့ညှစ်လျော့နည်းမကြာခဏအလယ်နားကို barotrauma ထက်မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ Antihistamines, decongestants နှင့် / သို့မဟုတ်နှာခေါင်းဖြန်းဆေးကြိုတင်အခနျးထဲဝငျဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နှေးကွေးတဲ့ compression နှင့် decompress နှင့်အတူ, များသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေရှိပါတယ်။
Myopia နှင့်အတွင်းတိမ် - Myopia HBOT ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏တစ်ဦး Reversible လုပ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်သော myopia ကုသမှုပြီးစီးပြီးနောက်, HBOT ကုသတဲ့စီးရီးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပါဘူးသောအခါ, တွေလိုပဲအမြင်အပြောင်းအလဲများကိုလုံးဝနောက်ပြန်လှည့်။ ရှိပြီးသားမျက်စိအတွင်းတိမ်အတွက်တိုးတက်မှု၏ acceleration2ATA ကျော်ဖိအားမှာနာတာရှည်ရေရှည်ထိတွေ့မှုတစ်ခုရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ Published အစီရင်ခံစာများအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုအသစ်ကမျက်စိအတွင်းတိမ်လေ့ယူအက်စ်အေများတွင်အသုံးပြုကြသည် 30 ကုသမှုမှ 50 ၏စီးရီးအတွင်းမဖွံ့ဖြိုးပါဘူးဖော်ပြသည်။
အဆုတ် - အဆုတ်နှင့်အောက်ဆီဂျင်အဆိပ်၏အာရုံကြောသရုပ်ကိုမကြာခဏ HBOT နှင့်အတူအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ကိုးကားထားပါသည်။ ဤအသရုပ်ကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းအောက်စီဂျင်သည်းခံစိတ်ကန့်သတ်ကောင်းစွာပုံမှန်လူတွေအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုများအတွက်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဆုတ်ရောဂါလက္ခဏာအသီးသီး 2.0 သို့မဟုတ် 2.4 နာရီ2သို့မဟုတ် 1.5 ATA မှာအောက်စီဂျင်မှနေ့စဉ်ထိတွေ့နေဖြင့်ထုတ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်။ အလားတူထိတွေ့မှုသုံးတဲ့အခါအောက်စီဂျင်တက်ခြင်း၏ဖြစ်ပွားမှု 1 လူနာကုသမှုနှုန်း 10,000 အကြောင်းပါ။ အောက်စီဂျင်တက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါဘူးတောင်မှအခါ, စက်မှုစိတ်ဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါလျှင်အဘယ်သူမျှမကျန်နေတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လေကြောင်းအဆီးအတားနှင့်အတူလူနာ decompress ကာလအတွင်းအဆုတ် barotrauma တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်ရှိသည်။ decompress ကာလအတွင်းအဆုတ် barotrauma ရှားပါးသည်။
တည်းကကုသမှုမရှိဘူး Pneumothorax - HBOT များအတွက်သာအကြွင်းမဲ့အာဏာ contraindication တည်းကကုသမှုမရှိဘူး pneumothorax ဖြစ်ပါတယ်။ HBOT ကုသမှုမပြုမီ pneumothorax ၏ခွဲစိတ်ခန်းသုံးကယ်ဆယ်ရေး, ဖြစ်နိုင်လျှင်, ကုသမှုဖို့အတားအဆီးဖယ်ရှားပေးပါသည်။ တစ်ဦးလူနာရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းပါဝင်သည်လျှင်တစ်ဦးကရင်ဘတ်က x-ray pneumothorax ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်: 1) အလိုအလျောက် pneumothorax ၏သမိုင်း; 2) thoracic ခွဲစိတ်၏သမိုင်း; သို့မဟုတ် 3) ရင်ဘတ်ဒဏ်ရာတစ်ဦးကသမိုင်း။ Pneumothorax decompress စဉ်အတွင်းအသက်ရှုကျင်းပနိုင်ရန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်သည့်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်။
အောက်စီဂျင်ဖမ်းဆီးရမိ - သိမ်းယူမှု၏ဖြစ်ပွားမှု 0.01 ကုသမှု၏ 28,700% အစီရင်ခံသည်တစ်နာရီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းများအတွက် 2.0 ATA ထက်လျော့နည်းမှာအစီရင်ခံစဖူး။ ကိုးကားစရာ; Davis က (1989) 1505 နှင့် 1979 အကြားကုသနှင့် 1987 Two-နာရီအစည်းအဝေးများခံယူနေသော 52,758 လူနာပြန်လည်သုံးသပ်။ အောက်စီဂျင်တက်ခြင်းအပြည့်အဝပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှသောအဘယ်သူကိုသာ5လူနာ, (0.009%) ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Claustrophobia - အထွေထွေလူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 2% အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာ Claustrophobia, ခံထားစိုးရိမ်စိတ်အချို့ကိုဒီဂရီဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအပျော့စားသက်သာစေသောဆေးစိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူသူတွေကိုလူနာတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနိုင်ပါသည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာ - ပါးစပ်တွင်းအလုပ်, အမြစ်တူးမြောင်းနှင့်ဖြည့်ပါအားလုံးပြည့်စုံသူဖြစ်ရမည်။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ barotrauma မဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ယာယီသွားထုပ်သို့မဟုတ်မပြီးဆုံးသေးသောအမြစ်တူးမြောင်းရှိပါကလူနာများကုသမှုမခံယူသင့်ပါတယ်။
Hyperbaric ဆေးပညာ, KK ဂျိန်း, MD Vol ၏ကျောင်းစာအုပ်။ 1, 2, 3
Hyperbaric ဆေးပညာအလေ့အကျင့်, အဲရစ် Kindwall, MD
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံးလက်ခံခြင်းဟာလူနာများ၏စောင့်ရှောက်မှု, လူနာစောင့်ရှောက်မှုစံနှုန်းများ၏လက်စွဲ။ 1988 Norkool, D ကို
Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး: တစ်ဦးကကော်မတီအစီရင်ခံစာ 1999 ။ UHMS
ထိုးဆင်းဖို့ကြံ့ခိုင်ရေး။ ဒံ (ချင်းမတူသောအအချက်ပေးကွန်ယက်)
UHMS (Undersea Hyperbaric ဆေးပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း)
IHMA (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Hyperbaric ဆေးပညာအစည်းအရုံး)
IBUM (Undersea ဆေးပညာ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့)
NBDHMT (ရေငုပ်အမျိုးသားဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Hyperbaric ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတက္ကသိုလ်)